Wafti Nabadaynta Beelo Ku Dagaalamay Sool In Muddo Ah Ku Maqnaa Oo Hargeysa Ku Soo Laabtay
(Hadhwanaagnews) Thursday, October 11, 2018 18:43:49
Wafti ka kooban Golaha Wakiiladda iyo Wasiiro oo uu Guddoominayay Guddoomiyaha Aqalka Wakiiladda Somaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa galabta dib ugu soo laabtay Magaaladda Hargeysa, ka dib markii ay soo dhamaystireen hawsha nabadaynta laba beelood oo gobolka Sool Diriri ku dhex martay.
Waftida oo a koobnaa Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Baashe Maxamed Faarax, Wasiirka Arrimaha Gudaha Maxamed Kaahin Axmed Iyo Wasiirka Waxbarashada It Sayniska Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir ayaa mudadii ay ku sugnaayeen Gobolka Sool waxaa ay socdaalo ku tageen deegaanada ay wada Degaan Beelaha colaadu dhex martay iyo kuwa at kala Degaan SI ay xogogaal ugu noqdaan khasaaraha ay colaadu sababtay una wacyi galiyaan bulshada deegaanadaasi ku dhaqan.
Waftida ayaa socdaalkooda ku tagay Deegaanada Kalabaydh,
Dhumay, Dabataag,Saaxdheer, iyo dharkayngeenyo.
Waxaana ay waftidu Gogol nabadeed labada beelood u dhigeen Magaalada Laascaanood Ee Xarunta Gobolka Sool, halkaasi oo Shirka nabadaynta Ee loogu garnaqayey labada beelood ka dhacay.
Maalinimadii Salaasada Ee lasoodhaafay taariikhduna ahayd 09/10/2018 ayaana shirkaasi nabadayna Ee loogu garnaqayey labada dhinac Soo gabagaboobaw waxaana laga Soo saaray Go,aamo lagu kala xukumay oo waafaqsan Shareecada islaamka, dhaqanka iyo kuwo Xukuumadu soo saartay.
Sidoo kale waxaa maalintii shalay Ee arbacada taariikhduna ahayd 10/10/2018 loo kala qaaday labada beelood Ee Walaalaha ah xukumadii go,aanada lagu kala xukumay kii ugu horeeyey oo ahaa aaskii ama duugidii dadkii ku kala dhintay oo dhamaa 20 ruux.
Iskusoo wada duuboo waftida ayaa ku guulaysatay inay Soo afjarto colaadii oo abuurto nabad it xasilooni ka dhex dhacda labada beelood Ee Qayaad iyo Bahararsame.